अर्बौको लगानीमा आम्दानी शुन्य भएपछि सीइओसाबहरु तनाबै तनावमाः राष्ट्र बैंक बेखबर - Aathikbazarnews.com अर्बौको लगानीमा आम्दानी शुन्य भएपछि सीइओसाबहरु तनाबै तनावमाः राष्ट्र बैंक बेखबर -
नेपालका २७ वाणिज्य बैंक ३ दर्जन विकास बैंक सयौं वित्तिय कम्पनी कोरोना महामारी बीच आम्दानी ह्वात्तै घटेपछि तनाबै तनाबमा दिन विताई रहेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई एटिएम शुल्क लिन नपाउने निर्देशन नै जारी ग¥यो । कर्जाका सेवा शुल्क देखि दर्जनौ अन्य सेवा शुल्कमा आधा भन्दा बढि कटैती ग¥यो । यो ग्राहक र आम नेपालीहरुका लागि राम्रो पक्ष पक्कै हो । यस्तो कोरोना महामारीका बीच । तर, अन्तर एटिएम कारोकार भएपछि सेवा शुल्क मार्फत केही आम्दानी गरेका बैंक र वित्तिय संस्थाको अहिले प्रमुख आम्दानी घटेपछि सीइओसाबहरु तनाबै तनाव थपिएको भेटिएको छ ।
कोरोना महामारीबीच जनतालाई केही राहत दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले यस्ता केही कुरामा छुट दिन निर्देशन भएपछि बैंकहरुले आपत्ती जनाउन थालेका छन् । एक वाणिज्य बैंकका सीइओले पंक्तिकारलाई नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– हामीले करिब ५ अर्ब भन्दा बढि एटिएम मेसिनमा लगानी गरेका छौं ।
गार्ड चौविसै घण्टा राखेका छौं । अहिले पछिल्लो समय त सेटिटाईजर र सरफाईमा समेत ठुलो रकम खर्च भएको छ । तर, सेवा दिए वापत १ पैसा पनि लिन पाइदैन यो कस्तो सेवा हो ? लेख्नु प¥यो नि सर । उनीले थपे कोरोना भाइरसको महामारी छ । एटिएममा पैसा टुटाउनु हुँदैन । तर, सेवा शुल्क छैन । हामी बच्ने आधार चाहि के छ त ?
नेपालमा कोरोना भाइरस बढेसंगै इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्ग र एटिएम कार्डबाट ठुलो कारोबार भएको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष पक्कै हो । तर, सेवा दिए वापत केही शुल्क राज्यले पनि लिन्छ । बैंकले किन लिन नपाउने यसको उत्तर अहिले बैंकरहरुले खोजी रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक अब चाहि पर्दैन ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस नेपालमा देखिएसंगै लकडाउन भयो । यो बीचमा छुट दिँदा दिँदै बैंकहरुका सबै सूूचकमा नकारात्मक संकेत देखा त प¥यो तर, पनिबचाउँदै बैंकहरुले अगाडी बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो समय सेव दिँदै आएका सीइओको कर्मचारीहरुमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि बैंकहरु आफै चिन्तित बन्दै गएको ती बैंकरले दाबी गरे । खासगरी बैंकहरुको चित्त दुखाई एटिएम शुल्क लिन नपाएकोमा देखिन्छ ।
अर्को एक बैंकका सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भने अन्तर बैंकिङ्ग एटिएम प्रयोगमा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनले करोडौं घाटा लागेकाले अब बैंकहरुले सेवा नै दिन सक्ने अवस्था छैन ।
उनीले भनेः– एउटा एटिएम मेसिनको मासिक खर्च ५० हजार लाग्ने तर यो निर्देशनले भविष्यमा एटिएम सुविधा बन्द नै हुने अवस्था आउँदा नआउला सकिदैन ।
उनीले दाबी गर्दै भने इन्टरनेट, मासिक मर्मत खर्च, घर भाडा, मेसिनमा पैसा राख्दा त्यसबाट गुमाउनुपर्ने ब्याज, सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधा, बिजुली बत्ति लगायतका खर्च जोड्दा एउटा मेसिन संचालनमा बार्षिक १२÷१५ लाख खर्च हुन्छ । तर, अन्तर बैंकिङ्ग एटिएम प्रयोगबाट उठ्ने शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई खर्च व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको छ नि ।
नेपाल भरी ५ हजार एटिए मेसिन संचालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख देखिन्छ ।
बिगतमा अन्तर बैंकिङ्ग एटिएम प्रयोगमा शुल्क लिन पाइने हुँदा लागतमा केहि राहत भएको तर अहिले बैंकहरु तनाबै तनाबमा बसेको तथ्य छलङ्ग छ ।
लकडाउन अगाडी अन्तर बैंकिङ्ग एटीएम प्रयोगबापत मासिक २० हजार आम्दानी हुने गरेको थियो । यो सेवा बापत प्रत्येक कारोबारमा १५ रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । जसबाट जुन बैंकको एटीएम कार्ड हो उसले ५ देखि ७ रुपैयाँ पाउँथ्यो । तर आज यो आम्दानी घटेको देखिन्छ । हामी मारमा परेका छौ नि । उनीले दाबी गरे ।
विदेशी पर्यटकले सम्बन्धित देशको बैंकले उपलब्ध गराएको कार्ड प्रयोग गर्दा त्यसबाट केहि आम्दानी माबै भएको देखिन्छ । तर, अरु कुनै शुल्कमा बैंकहरुले सेवा शुल्क लिन पाउदैनन् ।
शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले खर्च गरेर एटिएम सेवा दिन उत्साहित नहुने हुँदा भोलिका दिनमा एटीएम मेसिनलाई बैंकहरुले प्राथमिकतामा नराख्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । यस बारेमा समयमै सोच्नु पर्ने बेला आएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत अन्तर बैंकिङ्ग एटिएम प्रयोगमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसले बैंक ग्राहक र आम जनतालाई त पक्कै राहत नै भएको आभाष देखिन्छ । तर, सेवा दिनेहरुले शुल्क नपाएपछि त दुख मान्नु स्वभाविक नै हो । यो देशमा सबैलाई राहत चाहिएके पक्कै छ । तर, राहत दिनुपर्ने विश्वका धनीका सूचिमा पर्ने देखि नेपालमै अर्बपति बनेका उद्योगी चाही कहाँ छन् । यसबारे राज्यले के हेरिरहेको छ त ? सचेत भया ?
हुण्डाई गाडीको नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्ट माथी कारवाहीको मागः पूरानै भन्सार दरमा छुट्टाईएका विजुलीका गाडीमा १० लाख देखि २० लाख बढि लिएर लुट मच्चाएको खुलासा ?
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका ग्राहकलाई ग्रान्डीमा विशेष छुट
जनता बैंक नेपालको सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय